Dhaabni Oromiyaa bulchu Labsii Yeroo Muddamaa kaasuuf humna qabaa? - BBC News Afaan Oromoo
24 Ebla 2018
Mana-maree mootummaa Federaalaa muudama kaabinoota Dr. Abiyyiin dhiyaatan yeroo raggaasisanitti
Labsiin Yeroo Muddamaa kan lammaffaa Guraandhala keessa nagaafi tasgabbii siyaasaa fiduuf, akkasumas aangoo gadi dhiisuu Ministira Muummee duraanii Hayilemaariyaam Dassaaleny waliin walqabatee karaa nagaan aangoo walitti dabarsuu tolchuuf jedhame ture kan labsame.
Labsiin kun waadaa haaromsaaf galameen hidhamtoota gara garaa hiikamuutti aanee labsamuusaatiin dhaabbileen mirga namoomaa dirree siyaasaa akka bal'atu abdatame deebisaa dhiphisa jechuun soda qaban ibsaaa turan, ibsaas jiru.
Biyyoonni michoota Itoophiyaa ta'anis Labsii Yeroo Muddamaa kana jijjiirama gama haaromsaan waada galame gufachiisa jechuun mormuun isaanii ni yaadatama. Keessattu, Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu 'jijjiirama dhiyeenya kana ta'aa jiru gatii dhabsiisa' jechuun cimsee akka mormu ibsee ture.
Labsiin Yeroo Muddamaa nurraa haa ka'u…
Yeroo Labsii Muddamaaa kana keessa Naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti namoonni akka hidhamaniifi lubbuun darbaa akka jirullee dhaga'amaa jira. Lammileenis Labsichi akka ka'uuf himachaa jiraachuun dhaga'amaa jira.
Fakkeenyaaf, guyyaa kaleessaa mormiin magaalaa Ambootti ka'ee ture. Barataan mormii kanarratti hirmaate maqaan isaa akka hin dha'amne barbaadu tokko, dandii guddaa magaalattii keessa jirutti ba'anii mormii isaanii dhageessifataa akka oolan dubbata.
Dhaadannoon dhageessifataa turres jedha dargaggoon kun, ' tokkofffaan barattoonni nu biraa hidhaman akka hiikaman, lammaffaan Labsiin Yeroo Muddamaa akka nurraa ka'u, inni sadaffaan ammoo ajjeechaa lammilee nagaarratti Mooyyaleerratti raawwatame balaaleffachuu ture'.
Xiinxalaan Siyaasaa Obbo Jawaar Mohaammed Ministirri Muummichaa haasawaa yeroo gara garaatti hawwaasaaf taasisan keessatti waa'ee Labsii Yeroo Muddamaa maaliif akka hin dubbanne yeroo ibsu:
"Akka hubannoo kiyyatti caasaan Oromiyaa keessaa kan aanaafi gandarraa guutummaatti mootummaa [ABUT-ADWUI] jalaa waan ba'eef, sana qofa osoo hin taane caasaan DHDUO tiis sochii Qeerrootiin laamsha'ee gara uummataatti makamee waan jiruuf humna waraanaa kanaan deebifnee caasaa keenya diigame of ijaaruu dandeenya kan jedhu hawwii waan qaban natti fakkaata." Kana waan ta'eef jedha Jawaar Labsiin Yeroon Muddamaa kun akka turu fedhii waan qaban fakkaata akka ilaalcha isaatti. Kun garuu ammoo dogoggora natti fakkaata jedha, Obbo Jawaar.
Akka Obbo Jawaar jedhutti, koreen hoji raawwachiiftuu ADWUI Labsiin Yeroo Muddamaa kun akka labsamuu qabu ji'a Muddee keessa walii galanii turan. Hoggantoonni paartilee miseensa ADWUI irratti walii galuu isaanii ejjennoo isaanii ifa godhanii turan. Gama hoggana DHDUOtiin garuu ejjennoon ifaa ifatti fudhatame hin jiru. Akka Obbo Jawaaritti, sadarkaa hoggansaatti DHDUOn labsii kana deggereera. Sadarkaa hoggantoota giddu-galeessaa, miseensota caffeefi mana mareetti garuu akka mormaa jiran hubanna jedha xiinxalaa kun. Kanaaf, ejjennoo DHDUO kana jechuun hin danda'amu jedha.
Dhaabni Oromiyaa bulchaa jiru, DHDUO'n, Labsii Yeroo Muddamaa kana kaasuu danda'aa?
Madda suuraa, OPDO
Gaaffii kanaaf Obbo Jawaar Mohaammed, 'Hoggansi DHDUO Labsii kan yoo kaasuu kan baarbaadu ta'e yeroo torban tokko hin guunne keessatti kaasuudhaaf aangoofi sagalee guutuu qaba' jedha.
Yeroo ammaa kanatti jedha Obbo Jawaar, miseensota 'Komaandi Postii' keessaa baayyeen DHDUO-dha. Dura ta'aan Dr. Abiy, barreessaan ammoo Ministira Ittisaa kan ta'an Obbo Maqaasaa dabalatee afuritu keessa jiru. Kanaaf, sagalee guddaa qabu, jedha.
Kana malees, mana-maree ministirootaa keessatti DHDUO'n nama baayyee qaba, garee biraa keessaas kan isaan deggeran ni jiraatu. "Gara Paarlaamaatti kan dhufnu yoo ta'es DHDUO sagalee jabaa qabu. Namoonni garee biraarraa isaan deggeranis jiraachuun waan maluuf DHDUO Labsii Yeroo Muddamaa kana kaasuuf fedhii yoo qabaate torban tokko keessatti kaasuuf aangoo ni qaba," jedha Jawaar.
Jijjiirama barbaadame fiduuf aangoo gara siviliitti deebisuu qaba...
Muudamni haarawaan naannoo Oromiyaafi sadarkaa mootummaa Federaalaatti ta'e kun osoo Labsiin Yeroo Muddamaa kun hojiirra jiruu waanta yaadame milkeessuun akka hin danda'mnes ni dubbata Jawaar.
Sababiisaas yeroo ibsu, "Aangoon biyya sanaa seeraan sivilii keessaa fuudhamee bulchiinsa waraanaatiif kennameera. Ministirri Muummichaa walitti qabaa 'Komaadi Postii' kanaa ta'ulleen aangoon sirriin ajajoota waraanaafi warra basaasu bira jira.
Kaanaaf, Dr. Abiy jijjiirama nan fida jedhee yaadu fiduudhaaf aangoo arka isaatti, ministirootaafi caasaa siviliitti deebifachuu qaba," jedha Jawaar.